Warning: A non-numeric value encountered in /home/fjkmubaz/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6753
SAFIF Avaratranandohalo – FJKM Avaratr'Andohalo | SPAA 12
Sekoly fjkm AA
Tsy fanoratana tantara toy ny mahazatra loatra izao andàlan-tsoratra izao fa fanehoana ny maha Fifohazana ny FIFOHAZANA hahatakaran’ny Mpamaky ny Asa mahagaga nataon’Andriamanitra ho famojena Izao tontolo izao tao amin’ I Jesoa Kristy.
Raha nihevitra ny Jiosy fa ho avy hamonjy azy ny Mesia amin’ny alàlan’ny miaramila sy fitaovam-piadiana mahery vaika, dia diso hevitra ry zareo satrai ny FIANGONANA no naorin’Andriamanitra ho làlam-pamonjena ny olona rehetra.
NY TANTARAN’NY FIFOHAZANA ETO MADAGASIKARA
Famintinana ny tantara ity. Ny antsipirihany dia azo vakina ao amin’ny boky nosoratan’ny Mpitandrina Rabehatonina James tamin’ny taona 1991 mitondra ny lohateny hoe “Ny tantaran’ny Fifohazana eto Madagasika 1894 – 1990” hita ao amin’ny fivarotam-boky Antso Analakely.
Nandalo fotoana sarotra sy mahamay ny Fiangonana Protestanta teto Madagasikara tamin’ny fotoana nanatanterahan’ny Frantsay ny fanjanahana. Tao ny nafitsoky ny mpanompo sampy izay niroborobo fatratra tamin’ny andron’ny menalamba, tao ny ny nataon’ny mpitondra fivavahana katolika sasany, samy nilofo hanapotika ny “protestantisma”. Ny fikamabanana mpaniraka misionera frantsay atao hoe “Mission Protestante Française” (MPF) no fitaovana nampiasain’Andriamanitra handamina ny toe-javatra.
Nanirka ny Fanahy Masina tahaka ny tamin’ny andron’ny Apositoly indray Izy Tanàna dimy any amin’ny Faritra atsimon’ny Nosy no nanehoany izany : SOATANANA,MANOLOTRONY,VATOTSARA (Antsirabe) ,ANKARAMALAZA , ary FARIHIMENA . Olona tokana hatrany aloha no nampiasainy tamin’ireny toerana rehetra ireny, I zay vao nihanaka tamin’ny manodidina akaiky ary nanenika ny Firenena manontolo toy ny voantsinampy, toy an’I Jesoa Kristy.
Ny fiovam-pon’I Dada Rainisoalambo ombiasa malaza sady mpanao sikidy no niteraka ny FIFOHAZANA.
1 Dada RAINISOALAMBO tao Soatanana Fianarantsoa.
Ny 05 Oktobra 1894, dia nahita fahitana izay nitarika azy tamin’ny fanariana ny sampiny sy ny odiny I Dada Rainisoalambo ombiasy sy mpisikidy. Nitory tamin’ny fianakaviany sy ireo manodidina azy ny herin’I Jesoa Kristy izy. Nipoitra noho izany ny fifohazam-panahy tao avaratr’I Betsileo ary dia niely patrana nanerana an’I Madagasikara. Nitondra hery vaovao sy fiainam-baovao hoan’izay nandray azy izany fifohazana izany.
By Sergino Robel| 2019-10-23T21:45:23+00:00	octobre 21st, 2019|Sampana|0 Comments